Ọgwụ mgbochi - princetoncovid.org
Mmelite ọgwụ mgbochi
Ozi Ogwu Ozo
Ọrịa Pfizer Dị Maka Afọ 16 na 17
Ngalaba Ahụike Princeton ejikọtara na Hamilton Township, West Windsor Township na Olden Pharmacy iji nye ụlọ ọgwụ mgbochi Pfizer maka ndị nọ n'afọ 16 na 17 mpaghara. Nke ruru eru gụnyere: Ndị na-ebi ndụ, na-aga ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na Princeton anatabeghị ọgwụ mgbochi COVID-19 (na enweghị oge ọhụhụ) Enwere ike ịga […]
Gụkwuo: Ọrịa Pfizer dị maka afọ 16 na 17
Princeton Health, YMCA Team maka Eprel 29 Ọgwụ Mgbochi
Ngalaba Ahụike Princeton ga-ejide ụlọ ọgwụ mgbochi COVID-19 na Princeton YMCA na Tọzdee, Eprel 29 site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere iri. Ndị mmadụ 10 ma ọ bụ karịa nwere ike ịdebanye aha maka ụlọ ọgwụ ebe a. Ndebanye aha ahụ ga-emechi mgbe e dochara ọgwụ 18.
Gụkwuo: Princeton Health, YMCA Team maka Eprel 29 Ọgwụ Mgbochi
Machị 1 ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa; kpọọ maka ndị ọrụ afọ ofufo
Gov. Murphy kwupụtara taa na New Jersey ga-enweta ihe dịka 70,000 nke ọgwụ mgbochi COVID-19 a kwadoro ọhụrụ n'izu a. Steeti agbatịwokwa ntuziaka maka onye tozuru ịnata ogwu Mbido mbido Machị 15, otu ndị a ga-eto eto maka ọgwụ mgbochi COVID-19: Ndị nkuzi, gụnyere ndị ọrụ nkwado, na Pre-K-12 […]
Gụkwuo: Machị 1 ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa; kpọọ maka ndị ọrụ afọ ofufo
Nchịkọta ịgba ọgwụ mgbochi Ahụike
Ugbu a enweghị nhọpụta maka izizi izizi dị site n'aka Princeton Health Department. Biko akpọla ma ọ bụ zitere email na-arịọ maka nhọpụta. Ọ bụrụ n’itinyela ndokwa maka ọgwụ nke abụọ gị na Ngalaba Ahụike Princeton, ị ka ga-anara ọgwụ nke abụọ ahụ n’ụbọchị a kara aka. Ọgwụ ogwu ka dị oke. Princeton bụ […]
Gụkwuo: Mmelite ọgwụ mgbochi nke Ngalaba Ahụike
Ngalaba Ahụike Mercer County kwupụtara na mbido izu a na ọ gbanweela nkesa ọgwụ mgbochi dabere na NJ Department of Health. Biko pịa ebe a maka mmelite mgbochi nke February 10. ** Biko rụba ama: Ọ bụrụ na ị nwere ọgwụ nke abụọ ezubere na Ngalaba Ahụike Princeton, ị ga-enweta dose ahụ […]
Gụkwuo: Mpaghara na-ekwupụta mgbanwe na nkesa ọgwụ
Feb 8 mmelite ịgba ọgwụ mgbochi
Steeti ahụ agwala ndị ọchịchị Mercer County na n'oge ụkọ ọgwụ mgbochi ugbu a, ọ gakwaghị enye ọgwụ ụlọ ọgwụ. N'ihi ya, clinics ẹkenịmde Princeton Health Department na ndị ọzọ na ọchịchị ike ngalaba na Mercer County ga-etinye na-adịru nwa oge jide irè Feb. 13. Ozugbo ọkọnọ na-abawanye, na obodo […]
Gụkwuo: Mmelite ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa 8 nke Febrụwarị
Ọhụrụ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa site na Princeton Health Dept.
Gụkwuo: Ihe kachasị ọhụrụ na ịgba ọgwụ mgbochi sitere na Princeton Health Dept.
Acgba ọgwụ mgbochi na-amalite na Mercer County
Gba ọgwụ mgbochi na-amalite na Mercer County Enweela ọtụtụ ihe na akụkọ banyere usoro nke ịgba ọgwụ mgbochi iji chebe ọrịa COVID-19 na mbọ ndị obodo na-eweta ọgwụ mgbochi. Mwepụta a, n'ọtụtụ mba ezutewo ụfọdụ usoro ọkọnọ na nsogbu ndị ọzọ, mana na mpaghara, na obere ọkwa anyị, ihe na-aga nke ọma. […]
Gụkwuo: Ọgwụ mgbochi na-amalite na Mercer County